December 2017 – AsiaApps
December 29, 2017 January 3, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Camera ပိုင်းနဲ့ System ပိုင်းအချို့ကို Update လုပ်လိုက်တဲ့ One Plus 5T!
One Plus 5T ရဲ့ Version အသစ်ဖြစ်တဲ့ OxygenOS 4.7.6 OTA ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းအငယ်က မှထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Version အသစ်မှာတော့ Camera ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ System ပိုင်းဆိုင်ရာကို Update လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Camera…
December 29, 2017 WilliamSmartphone NewsNo Comment on US မာကတ်မှာ Mate 10 Pro ဖြန့်ချီမှုကိုတစ်လနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Huawei!
US မာကတ်မှာတော့ Huawei ဟာအခြေမခိုင်လှသေးတဲ့ Smart phone brand တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei အနေနဲ့လည်း US မာကတ်မှာနေရာယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတာ အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကတည်းက ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့တာပါ။ Starting next month, the…
လူတစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ရေဓာတ်ကနေရာယူထားတာဖြစ်လို့ လူသားတွေအတွက် ရေဓာတ်က အရမ်းအရေးပါပါတယ်။ ရေဓာတ်လုံလောက်ဖို့ တစ်နေ့ရေဘယ်နှခွက်သောက်ရမှာလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရေဓာတ်လုံလောက်ပြီလား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ တနေ့ရေဘယ်နှခွက်သောက်သင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို Plant Nanny application က ကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်။…
December 28, 2017 December 28, 2017 MoonReviewsNo Comment on အိမ်မှာနေရင်း Conversation လေးတွေလုပ်လို့ရမယ့် Speak – Practice Your English
သင်က အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာနေသူတစ်ယောက်လား။ ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်လား။ သင့်ကို အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေ့ကျင့်ပေးမယ့်သူမရှိလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ အဲ့တာဆိုရင်တော့ ဘာမှစိတ်မပူနဲ့တော့နော်။ Speak application လေးရှိနေပါပြီ။ Speak က တော့ သင့်ကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့…
December 28, 2017 December 28, 2017 MoonReviewsNo Comment on သင့်အနီးအနားက အခြားသူဖွင့်နေတဲ့ သီချင်းကို ရှာဖွေပေးမယ့် SoundHound – Music Discovery
ကားစီးနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းလျှောက်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အနီးအနားက သီချင်းသံကြားရင် ဘာသီချင်းလဲဆိုတာ သိချင်တာ လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်ဖူးကြပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို SoundHound ကဖြေရှင်းပေမှာပါ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်ပဲရောက်ရောက် မိတ်ဆွေ ကြားတဲ့ သီချင်းသံကို SoundHound က title, artist, album,…
Platform မတူတဲ့ Android, IOS, PC တို့တွေနဲ့ photo တွေ videoတွေ music တွေ share ရတာ အရမ်းခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့တော့နော်။ SHAREit application နဲ့ USB…
နတ်သူငယ်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကနိုင်မယ့် application လေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကစရာမလိုပါဘူး။ ဓာတ်ပုံထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ သူ့ဘာသာ auto ကပေးမှာပါ။ စုစုပေါင်း ဓာတ်ပုံ ၅ ပုံထည့်နိုင်ပြီး မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်…